Trump dia nanolotra drafitra hamoronana tranokala hiadiana amin'ny areti-mandringana Covid-19 ary nahagaga ny rehetra | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety vao haingana, Filoha Donald Trump (voampanga ho nanamaivana ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny) ary Deborah Birx (mpandrindra ny governemanta amerikana) dingana naseho mba hamaliana ny coronavirus, izay ao koa dia nanambara fa eo am-pananganana tranokala i Google izay afaka mamorona ny fototry ny paikady fitahirizana an'ity krizy ara-pahasalamana any Etazonia ity.
Raha ny filazan'izy ireo dia hamorona tranokala haingana ilay goavam-be mitady ao amin'ny Internet hanampy amin'ny famaritana raha mila fitsapana coronavirus ny olona na tsia ary avy eo dia hamindra azy ireo any amin'ny foibe fitsapana akaiky indrindra.
Ora vitsy taorian'ny fampisehoana an-gazety nataon'ny governemanta Trump, Google dia nanao fanamarihana manazava fa nanendry ny injenierany vitsivitsy fotsiny izy izay nirotsaka an-tsitrapo tamin'ny tetikasa notarihin'ny sampana abidia hafa hametraka sehatra an-tserasera hanampy amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny fizahana (ao anatin'izany ny fampitomboana ny isan'ny andrana fitiliana) ary ny fanamorana ny famantarana ireo olona tratry ny COVID-19.
"Raha ny tena izy dia eo am-piandohan'ny fampandrosoana ihany ny tetikasa ary kasaina hatao any amin'ny faritr'i Bay ny fitsapana, manantena ny hitatra bebe kokoa rehefa mandeha ny fotoana," hoy ny sampana serasera an'ny Google tao amin'ny Twitter.
"Miara-miasa amin'ny governemanta amerikana izahay hanangana tranokala natokana ho an'ny fanabeazana, fisorohana ary loharano COVID-19 eo an-toerana manerana ny firenena."
Reuters dia nitatitra fa Verily (Siansa momba ny Fiainana Google taloha), zanaky ny abidia monina any San Francisco, manampahaizana manokana amin'ny fikarohana siansa fiainana, no ao ambadik'ity tetikasa ity na farafaharatsiny miandraikitra ny famoronana vavahadin-tserasera, manondro fa ny tranokala dia mbola tsy vonona ny hosedraina akory amin'ilay faritra kasaina hampiasana azy voalohany (izany hoe ny faritra California Bay).
Ny filoha Nilaza i Donald Trump fa kitapo fitsapana virus no an-tapitrisany hanohanana ny ezaka hiadiana amin'ny COVID-19, saingy nilaza izy fa tsy noheveriny ho betsaka no ilaina.
Nilaza izy fa injeniera Google 1.700 XNUMX no miasa tamin'ny tranokala nandritra ny lahateniny, raha tena mifanaraka amin'ny isan'ny mpiasa nanolo-tena an-tsitrapo tao amin'ny Google hamorona fitaovana hiadiana amin'ny virus coronavirus io isa io.
Ny fitantanan-draharaha an'ny filoha Donald Trump mbola dia tsy nanazava izay tena tetikasany hiadiana amin'ny areti-mandringana ny coronavirus mifandraika amin'ny COVID-19. Satria ireo tompon'andraikitra ambony amin'ity fitantanan-draharaha ity izay nandray anjara tamin'ny famolavolana ny drafitry ny areti-mandringana dia toa toy ny vonona ny handeha ilay tranonkala malaza Verily ary ampahany manan-danja amin'ny tetikadin'izy ireo, dia mety mila fotoana kely izy ireo hamoronana drafitra vaovao.
Ny tranga voamarina fa voan'ny coronavirus any Etazonia dia nitombo hatramin'ny 2,100, na dia kely aza ny porofo ary nitombo hatrany ny isan'ireo maty 48. West Virginia no fanjakana tokana nitatitra trangana virus fantatra fantatra ny zoma alina teo. Etazonia dia miatrika ny fahatsinjovana fitomboana haingana amin'ireo isa ireo, toy ny nitranga tany Chine, Italia, Korea atsimo, ary ireo firenena hafa.
Donald Trump dia nanambara fa hamarana ny fifampiraharahana eo anelanelan'ny Kongresy sy ny fitondrany dia hamoaka $ 50 miliara hiadiana amin'ny valanaretina coronavirus mitombo.
Voalaza ihany koa fa nandray fepetra izy mba hanomezana fahafaham-po kokoa ny dokotera sy ny hopitaly hamaly ny krizy, ao anatin'izany ny fanamorana ny fitsaboana ny olona lavitra ary ny fiantohana fa "ny Amerikanina miasa mafy dia tsy hahafoana ny tombontsoany satria tsy maintsy ao an-trano izy ireo.
Anisan'ireto fepetra ireto ny fialan-tsasatra marary roa herinandro ary hatramin'ny telo volana misy ny fianakaviana sy karama fialantsasatra ara-pitsaboana, tombony bebe kokoa amin'ny tsy fananan'asa asa, fitsapana maimaimpoana, eny fa na dia ho an'ireo tsy misy antoka aza, fanampiana ara-tsakafo fanampiny ary famatsiam-bola federaly ho an'ny Medicaid.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Trump dia nanolotra drafitra hamoronana tranokala hiadiana amin'ny areti-mandringana Covid-19 ary nahagaga ny rehetra